Print Page - မြကျွန်းညို လမ်းပြမြေပုံ
မောင်/မယ်သစ်လွင်များ ကြိုဆိုရာ => မြကျွန်းညို ထဲမှ အခက်အခဲများ => Topic started by: ကိုရင်ပြုံး on November 01, 2019, 02:52:15 AM
Title: မြကျွန်းညို လမ်းပြမြေပုံ
Post by: ကိုရင်ပြုံး on November 01, 2019, 02:52:15 AM
Show unread posts since last visit. (https://achittatkathomyakyunnyo.com/index.php?action=unread)
Show new replies to your posts. (https://achittatkathomyakyunnyo.com/index.php?action=unreadreplies)
၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ နေ ့မှ စတင်၍ အသစ်ဝင်ရောက်လာသည့်မန်ဘာများနှင့် post တစုံတရာ တင်ဘူး ခြင်း မရှိသည့် မန်ဘာများ အနေဖြင့် မြကျွန်းညို ဖိုရမ်အတွင်းရှိ လက်ရှိ ဖတ်ရနေသော ကဏ္ဍများအား မြင်ရတော့မည် မဟုတ်ပါ ။ ပထမနှစ် regular member များ အနေဖြင့် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုရာ ကဏ္ဍ တွင် အနဲဆုံး နှုတ်ဆက် post တခု တင်ပြီးမှသာ ဖိုရမ်အား ပုံမှန် အနေထားဖြင့် ပြန်လည်ဖတ်ရှူ ရ နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည် ။ လက်ရှိ ကျောင်းတက်နေကြသည့် Post မတင်ဘူးသေးသော ပထမနှစ်ကျောင်းတော်သားများ အနေဖြင့်လဲ ဖိုရမ်အားပုံမှန် ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် မြကျွန်းညိုမှ ကြိုဆိုပါသည် (https://achittatkathomyakyunnyo.com/index.php?topic=19.0) တွင် ပထမဆုံး Post ကို တင်ပေးဘို ့လိုအပ်ပါတယ်။
မိမိပြန်ပြောချင်တဲ့ ခေါင်စဉ်စာမျက်နှာ ရဲ့ အောက်ဆုံးက Reply ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကို နိပ်ပီးဖြစ်စေ ၊ စာမျက်နှာအောက်ခြေ မှာ ရှိတဲ့ ( + Quick Reply) ကိုနိပ်ပီး ပေါ်လာတဲ့ အကွက်လေးထဲ မှာ ဖြစ်စေ ကိုယ်ရေးချင်တာကို ပြန်ရေးလို့ရပါတယ် ။ ရေးချင်တာ ရေးပြီးသွားယင် အစမ်းတင်ပီး စစ်ကြည့်ဘို့အတွက် Preview ခလုတ်နဲ့စာတင်လိုက်ဘို့အတွက် Post ခလုတ် ၂ ခု ရှိပါတယ် ။ post အစမ်း တင်ကြည့်ချင်ယင်တော့ ဒီမှာ စမ်းသပ်ခန်း (http://achittatkatho.net/index.php?topic=1753.0) ရှိပါတယ် ။
Title: Re: မြကျွန်းညို လမ်းပြမြေပုံ
Post by: ကိုရင်ပြုံး on February 11, 2020, 12:26:14 AM
Title: အထူးကျူရှင်ကျောင်းတော်သား လယ်ဘယ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး
Post by: ကိုရင်ပြုံး on June 09, 2020, 01:18:25 AM